အင်တာနက်နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းအပိုဆောင်း ဦး နှောက်လေ့လာမှု
အင်တာနက်စွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိစာရင်း ဦးနှောက် လေ့လာမှုများ။ ချွင်းချက်မပါဘဲ, ရှိသမျှလေ့လာမှုများအင်တာနက်ကိုစွဲထဲမှာစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုတွေ့ပြီ။ စာပေ၏ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအင်တာနက်စွဲတစ်ခွဲ-type အမျိုးအစားအဖြစ်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအငြင်းအခုံစေသည် အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို (2015)။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအားဖြိုခွဲရန်ရည်ရွယ်သည့် EEG လေ့လာမှုနှစ်ခုကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ဒါ့အပြင်ကိုကြည့်ပါ Porn အသုံးပြုသူများပေါ်မှာရှိသမျှဦးနှောက်လေ့လာရေးလက်ရှိစာရင်းနှင့် porn & sex စွဲလမ်းမှုအပေါ်စာပေ / ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များဤပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ:
ကိုယ်တိုင် - ရိပ်မိပြProbleနာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှု - သုတေသနဒိုမိန်းလိုအပ်ချက်နှင့်ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာရှုထောင့်မှပေါင်းစည်းထားသောပုံစံ (2019)
အာရုံဖြစ်ရပ်-related အလားအလာအပေါ်အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှု (2008)
အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုသူ (2009) တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့် prepotent တုံ့ပြန်မှုတားစီးလုပ်ဆောင်ချက်များကို
EEG ၏အချိန်-အကြိမ်ရေဝိသေသ (2009) အပေါ်အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု
ရောဂါဗေဒတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လစ်လပ် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ရပ်တစ်ခု-related အလားအလာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု (2010)
အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါနှင့်အတူလူအတွက် Impulse တားစီး: တစ် Go ကို / NoGo လေ့လာမှု (2010) မှ electrophysiological သက်သေအထောက်အထား
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလှုပ်ရှားမှုများ၏အင်တာနက်စွဲအယူအဆ (2010): ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးအင်တာနက်စွဲအန္တရာယ်အဆင့်ကွဲပြားခြားနားမှု
အဆိုပါလူငယ်အင်တာနက်စွဲလမ်း (2010) ၏အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာဖြစ်ရပ်-related အလားအလာများ၏သုတေသန
အိုင်ကျူစမ်းသပ်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးအင်တာနက်စွဲခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်သိမြင်မှု function ကို၏ပဏာမလေ့လာမှု (2011)
Stroop တာဝန် (2011): အထီးအင်တာနက်ကိုစွဲနေတဲ့အရောင်-စကားလုံးကနေချို့ယွင်းအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုသက်သေအထောက်အထားများပြသ
အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုသူများ (2011) တွင်အစောပိုင်း-အဆင့်မျက်နှာအမြင်အတွက်လိုငွေပြမှု
အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါနှင့်အတူပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက်မူမမှန်အဖြူအရေးပါသမာဓိ: တစ်ဦးကဝစော-အခြေပြု Spatial စာရင်းအင်းလေ့လာမှု (2012)
fMRI အားဖြင့်ထင်ရှားခန္ဓာကိုယ်၏ဖြစ်နိုင်သောအာရုံကြောဆက်စပ် (2012): တစ်ဘောလုံးကို-ပစ်ကာတွန်း task ထဲမှာဆယ်ကျော်သက်အင်တာနက်စှဲလမျးသူ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောဦးနှောက်ကို Activation
တစ်ဦးကအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု: အင်တာနက်စွဲရောဂါအတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုချို့ယွင်း။ (2012)
အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါနှင့်မရှိဘဲစိတ်ဓာတ်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ရှန်ဟိုင်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက် Neurotransmitters ၏ Serum Levels နဲ့နှိုင်းယှဉ်: တစ်ဦးကဖြစ်ရပ်မှန်-ထိန်းချုပ်ရေးလေ့လာမှု (2013)
အင်တာနက်စွဲ (2013) တွင်ကျိန်းဝပ်-ပြည်နယ် beta ကိုနှင့် gamma လှုပ်ရှားမှု
အင်တာနက်စွဲလမ်း (2013) နဲ့ရောဂါအရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးလက်တွေ့နမူနာအတွက် electroencephalograph (EEG) BrainMaps ပုံစံများ
အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါနှင့်အတူပြည်သူ့အတွက်ချို့ယွင်းမှားယွင်းနေသည်-စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအမည်: ဖြစ်ရပ်တစ်ခု-Related fMRI လေ့လာမှု (2013) ။
ကျောင်း-ဘိုးဘွားရိပ်သာကလေးများအတွက်နှလုံးခုန်နှုန်း variable ပေါ်ကအင်တာနက်စွဲလမ်းမှု၏ဆိုးကျိုးများ (2013)
အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါ (2013) နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တုံ့ပြန်မှုစောင့်ကြည့်ရာထူးအမည်တစ်ခုမှားယွင်းနေသည်-Related အဆိုးမြင်အတွေးတွေအလားအလာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး
အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါ (2013) နဲ့လူယုတ်လျော့တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး function ကို
အင်တာနက်စွဲ (2014) တွင် comorbid စိတ်ကျရောဂါနဲ့ဆက်စပ် differential ငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ် EEG ပုံစံများ
အွန်လိုင်းဦးနှောက်: လေ့ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်စပ်မှု (2014)
အင်တာနက်စွဲလမ်း (2014) နဲ့မြီးကောင်ပေါက်များတွင်ချို့ယွင်းတိုကျရိုကျ-Basal Ganglia ဆက်သွယ်မှု
Prefrontal ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်း Neuropsychological နှင့် Neuroimaging တွေ့ရှိချက်များ၏သီအိုရီမော်ဒယ်နဲ့သုံးသပ်ချက်များ (2014)
အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (2014) ကရှာဖွေတွေ့ရှိဆယ်ကျော်သက်အင်တာနက်ကိုစွဲ၏ဦးနှောက်အတွက်အမျိုးမျိုးသောဆုလာဘ်များနှင့်တုံ့ပြန်ချက်မှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု
အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းတစ်ဦးချင်းစီအရက်-မှီခိုလူနာ (2014) နဲ့ Impulse နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုမျှဝေ
အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါအတွက်နှောင့်အယှက်ဦးနှောက် Functional ကွန်ယက်: နားခိုရာ-ပြည်နယ် Functional Magnetic ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging ကလေ့လာမှု (2014)
ပိုမိုမြင့်မားသောမီဒီယာ Multi-tasking လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ anterior Cingulate Cortex (2014) တွင်သေး Grey က-အရေးပါ Density နှင့်ဆက်နွယ်နေသည်
ပြဿနာကအင်တာနက်အသုံးပြုမှု features တွေနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေစဉ်အတွင်းတုံးတုံ့ပြန်ချက်အပြောင်းအလဲနဲ့ (2015)
ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ကျန်းမာနုပျိုလူကြီးများ (2015) အင်တာနက်သဘောထားကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုနဲ့ဆက်စပ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု
အာရုံကြောစနစ်များကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်“ စွဲလမ်းမှု” ကိုခွဲဝေပေးခြင်း (2014)
အင်တာနက်ကို Addictio (2015) PDF ကိုအပေါ် Neuroscientific တွေ့ရှိချက်တစ်ခုက Short အကျဉ်းချုပ်
အင်တာနက်နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲအခြေခံသည့် neurobiological နှင့် pharmaco-မျိုးဗီဇယန္တရားအပေါ်နယူးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု (2015)
Visual Oddball Paradigm (2015) နဲ့အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါနှင့်အတူပြည်သူ့အတွက် Electroencephalogram Feature ကိုထောက်လှမ်းခြင်းနှင့်ခွဲခြားရေး
အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှု (2015) ၏မော်လီကျူးများနှင့် Functional Imaging
အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါ (2015) နဲ့မြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာထစ်အငေါ့ corticostriatal အလုပ်လုပ်တဲ့ဆားကစ်။
ဘယ်လိုအင်တာနက်ကို Reshaped လူ့သိမှတ်ခံစားမှုရှိပါသလား (2015)
ပြဿနာကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနဲ့ Immunization ရာထူးအမည် (2015)
အင်တာနက်စွဲ (2015) နဲ့တဦးချင်းစီအတွက်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏အာရုံကြောအလွှာ
တစ်ဦးရှေ့ပြေးလေ့လာမှု (2015): ဆယ်ကျော်သက်အတွက်အရံအသှေးကို dopamine အဆင့်နှင့်အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါတို့အကြားဆက်ဆံရေးမျိုး
အင်တာနက်စွဲလမ်းပုံမမှန်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်, အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုနှင့် Impulse: ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ် (2015)
အင်တာနက်စွဲဆယ်ကျော်သက်အတွက်နှောင့်အယှက်အကြား hemisphere အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်အခြေခံအဆောက်အဦးနားချင်းဆက်မှီ (2015)
အင်တာနက်စွဲလမ်းအတွက် Electrophysiological လေ့လာမှုများ: Dual-ဖြစ်စဉ်ကိုမူဘောင်အတွင်းတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု (2015)
ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို (PIN နံပါတ်) ၏ဇီဝအခြေခံနှင့်ကုထုံးသက်ရောက်မှု (2015)
အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်အကြားအင်တာနက်-related စကားကိုတုန့်ပြန်ချို့ယွင်းတားစီးနှင့်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်: အာရုံစူးစိုက်မှုကို-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ (2016) နဲ့တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်
ကြိုးယန္တရားများနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်း (2016) အတွက်အားနည်းချက်အတွက် prefrontal ညာဘက် / လက်ဝဲ cortical အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်လိုငွေပြမှု
ငယ်ရွယ်လူကြီးများ (2016) တွင်အင်တာနက်စွဲလမ်း၏ functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်
Show ကိုချို့တဲ့ Inhibitory ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူရိုက်ယူခြင်းပြဿနာကိုအင်တာနက်အသုံးပြုသူများ: Stop အချက်ပြခြင်းနှင့်ရောနှောထားသောလောင်းကစားလုပ်ငန်းများ (2016) မှအထောက်အထား
ပြောင်းလဲ gray matter Volume ကိုနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းမူတည်နှင့်အတူကောလိပ်ကျောင်းသားများအတွက် White ကအရေးပါသမာဓိ (2016)
အင်တာနက်ကိုစွဲအကြားအင်တာနက်ကအဘို့အ Cue-သွေးဆောင်တဏှာ (2016)
adenosine အားဖြင့်ထုတ်ဖော်အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်အတူလူနာအတွက် functional အပြောင်းအလဲများကိုနှောက်သွေးစီးဆင်းမှု perfusion ပုံရိပ် 99mTc-ECD SPET (2016) အလေးပေး
၏အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအကှေ့ပုံမမှန်ခြင်း reactivity ကို အင်တာနက် စှဲမွဲမှု ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုဆွသုံးပြီးအပျက်သဘောနှင့်အပြုသဘောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များ (2016) စော်ကားကျူးလွန်
အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မမှန်နှင့်ဆက်စပ်သော Neurobiological တွေ့ရှိချက် (2016)
မှီခို, iPod ကိုမှီခိုစာပို့နှင့် Delay (2016) ဝ
ပြဿနာအတွက်ဘက်လိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၏ဇီဝကမ္မအမှတ်အသားများ အင်တာနက်ကို အသုံးပြုသူများသည် (2016)
အင်တာနက်စွဲရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်မျက်နှာအပြောင်းအလဲနဲ့များ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှု: ဖြစ်ရပ်တစ်ခု-related အလားအလာလေ့လာမှု (2016)
အင်တာနက်ကိုသုံးစွဲခြင်း: Molecular အဆိုပါ OXTR ဗီဇအပေါ်တစ်ဦး functional မူကွဲ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်ကွယ်ကလှုံ့ဆျောမှုနှင့် Cross-ယဉ်ကျေးမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်ကို (2016)
အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှု (2016) နဲ့လူငယ်လူရွယ်၏လျှို့ဝှက် EEG လှုပ်ရှားမှုများများအတွက်တစ်ဦးနှစ်ဦး-အဆင့် Channel ကိုရွေးချယ်ရေးမော်ဒယ်
အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်း၏မော်လီကျူးလေ့လာမှု (2016) အတွက်တစ်ဦးထိခိုက်စေအာရုံကြောသိပ္ပံမူဘောင်
ဦးနှောက်လှို, inhibitory ထိန်းချုပ်မှုယန္တရားနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်း (2016) တွင်ကြိုးဘက်လိုက်မှု
အင်တာနက်စွဲအတွက် Electrophysiological လေ့လာမှုများ: Dual-ဖြစ်စဉ်ကိုမူဘောင်အတွင်းတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု (2017)
အင်တာနက်စွဲ (2017) နဲ့မြီးကောင်ပေါက်များတွင်ပြောင်းလဲကို Default mode, နံရံပစ်ကစားနည်း-parietal နှင့် salience ကွန်ရက်များ
တိကျသောအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတားဆီးထိန်းချုပ်မှုအခန်းကဏ္ - - fMRI လေ့လာမှု (၂၀၁၇)
အင်တာနက်စွဲ (2017) အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုခံယူလူနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအာရုံကြော Correlate
အချိန်ငွေ Is: Gain နှင့်ဆုံးရှုံးမှု Intertemporal ရွေးချယ်မှု (2017) တွင်စမတ်ဖုန်းအမြင့်အသုံးပြုသူများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်
အင်တာနက်စွဲနှင့်၎င်း၏ neurobiological ဆက်စပ်မှု (2017) ၏သိမြင်မှု dysregulation
စမတ်ဖုန်းများနှင့်နျူကလိယ accumbens ၏မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ် (2017) ရက်နေ့မှာ Facebook ကိုအသုံးပြုမှု
ရွံရှာမျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းအသိအမှတ်ပြုအတွက်လိုငွေပြမှု: တစ်ဖျန်ဖြေအဖြစ်ခံစားစိတ်ဖိစီးမှု (2017)
လူမှုမီဒီယာတွေကိုမှသဘောဆောင်သော Hedonic တုံ့ပြန်မှု (2017)
Comorbid ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲ Attention Deficit / Hyperactivity Disorder အတွက်နားခိုရာ-ပြည်နယ်ဘက်စုံ electroencephalography ပုံစံများအတွက်ကွာခြားချက်များ (2017)
ပုံမှန်မဟုတ်သောဆုကြေးနှင့်အပြစ်ဒဏ်ကိုအင်တာနက်စွဲလမ်း (2017) နဲ့အာရုံ Associated
အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောစနစ်, FRN နှင့်လူငယ်များအတွက်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု (300) တွင် P2017 Effect ထံမှအထောက်အထားများ
ဦးနှောက်အတွက် Web ကိုစွဲ: cortical လှို, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အမူအကျင့်အစီအမံ (2017)
အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှု (2017) ၏သဘောထားကိုနှင့်အတူပတျသကျကြောင်းနားခိုရာ-ပြည်နယ် Functional ဆက်သွယ်မှုများ၏တန်ဖိုးများ Extracting
Self-လေးစားမှု, narcissism နှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းအတွက်ဇီဝကမ္မလှိုအကြားအစည်းအရုံး: တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှု (2017)
တစ်ဦး cue-reactivity ကိုပါရာဒိုင်းအတွက်အမြင်အာရုံနှင့်အာရုံတွေကိုသုံးပြီးအင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးရောဂါအတွက် Cue-သွေးဆောင်တဏှာ (2017)
ဖြစ်ရပ်တစ်ခု-Related အလားအလာလေ့လာမှု (2017): အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ချို့ယွင်း Empathy တို့ဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ယူခြင်း
ကျောင်းသားများဖို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှု, ဟေမိုဂလိုဘင်အဆင့်နှင့် Leukocyte Levels နဲ့အတူအင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုအကြားဆက်ဆံရေးမျိုး (2017)
brainwave နှင့်နက်ရှိုင်းသောသင်ယူခြင်း (2017) ကိုသုံးပြီးစိတျလှုပျရှားမှု၏စည်းမျဉ်းများအတွက်စမတ်ဖုန်းသုံးရင်အသိအမှတ်ပြုတစ်ခုအားသုံးသပ်ခြင်း
Wired: အစာရှောင်ခြင်းပွေးညီမိသားစုများ (6) တွင်အဆိုပါစိတ်ဖိစီးမှုအပေါ်မီဒီယာနှင့်နည်းပညာအသုံးပြုမှုသက်ရောက်မှု (cortisol) နှင့်ရောင်ရမ်းခြင်း (interleukin IL-2018)
သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများ (အိုင်စီတီ): အင်တာနက်ပြဿနာအသုံးပြုမှု, ဗွီဒီယိုဂိမ်းများ, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, MULTICAGE-နေကြပါပြီ (2018) ကို အသုံးပြု. instant messaging နှင့်လူမှုကွန်ယက်
ပြဿနာကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုနှင့်တဏှာ (2018)
ထိုင်ဝမ်ကျောင်းအသက်ကလေးအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုနှင့်သင်ယူမှုအာရုံစိုက်မှုအပေါ်အင်တာနက်စွဲလမ်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (2018)
အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေး Disorder နဲ့လူ့ဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းပုံ: WeChat စွဲအပေါ်ကနဦးအသိအမြင် (2018)
Pavlovian-to-ဆာလွှဲပြောင်း: Internet application များ (2018) ၏အသုံးပြုမှုကိုနှင့် ပတ်သက်. ရောဂါဗေဒယန္တရားများအကဲဖြတ်ရန်အသစ်ပါရာဒိုင်း
အင်တာနက်ကိုစွဲအကြားကွန်ယက်ကိုအချက်အလက်များ၏အလိုအလျောက်ထောက်လှမ်းအားသာချက်: အမူအကျင့်များနှင့် ERP သက်သေအထောက်အထား (2018)
ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောသက်သေအထောက်အထား (2018): ဂိမ်း-စွဲဆယ်ကျော်သက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မိမိကိုယ်ကိုထက်၎င်းတို့၏ဆိုက်ဘာ-မိမိကိုယ်ကိုပိုမိုခွဲခြားသတ်မှတ်
အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုနှင့်အတူလူငယ်အတွက်ချို့ယွင်း Oriental: အကိုအာရုံစိုကွန်ယက် Task ကို (2018) မှအထောက်အထား။
Electrophysiological လှုပ်ရှားမှု Non-လက်တွေ့တွင်လူဦးရေ (2018) အင်တာနက်စွဲလမ်း၏အားနည်းချက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်
တစ်ခုစိတ်ခံစားမှု Stroop Task ကို (2018) မှပဏာမအထောက်အထား: ပြဿနာကအင်တာနက်အသုံးပြုသူများအတွက်ထုတ်ယူခြင်းအပျက်သဘောဆောင်သောလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်
ငါ့ကို Away တွန်းအားပေးရပ်တန့်: Facebook ကိုစွဲလမ်း၏ဆွေမျိုးအဆင့် Facebook ကလှုံ့ဆော်မှု (2018) အတွက် Implicit ချဉ်းကပ် Motivation နှင့်ဆက်နွယ်နေသည်
ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်အင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်လိင်ခြားနားချက်: အနားယူ-ပြည်နယ် fMRI (2018) မှအထောက်အထား
အမူအကျင့်ရွေးချယ်မှု (2018) သို့တန်ဖိုးကိုအကဲဖြတ်ဖို့ related ဦးနှောက်အချက်ပြမှုများနှင့် Self-ထိန်းချုပ်မှုပြောင်းလဲ
အလွန်အကျွံလူမှုမီဒီယာအသုံးပြုသူများအိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကို (2019) တွင်ချို့ယွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသရုပ်ပြ
အမျိုးသမီး၌တရားပိုဒျ opercularis နှင့်ဆက်စပ်အင်တာနက်စွဲ (2019)
ဂိမ်းတွေကကမှတဆင့်အဖြစ်မှန်ထွက်ပြေးလာသူအစစ်အမှန်ဘဝလှုံ့ဆော်မှု (2019) ကျော်ကို virtual များအတွက်သွယ်ဝိုက် preference ကိုဆက်စပ်နေသည်
ကျပန်း topology အဖွဲ့အစည်းနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်း၏အမြင်အာရုံအပြောင်းအလဲနဲ့ယုတ်လျော့နိမ့်ဆုံး spanning tree ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (2019) မှအထောက်အထား
Impulse နှင့်ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအထူ (2019) အကြားအပြန်အလှန်အားဖြင့်ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကအင်တာနက်စွဲ, ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း, ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုများအကြားကွဲပြားခြားနားမှု
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါနှင့်အတူကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ Bio-စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များ: တစ်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု (2019)
ကွန်ယက်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှတဆင့်ငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ် EEG အတွက်အင်တာနက်စွဲလမ်း၏ပြောင်းလဲ topological ဆက်သွယ်မှု (2019)
အဆိုပါချို့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်-Making Process ကိုနှင့်စမတ်ဖုန်းစွဲ (2019) နှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်အရေပြား conduction တုံ့ပြန်မှု: မကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုကောင်းမွန်သောပုံပြင်များ Make
ပြဿနာကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို (2019) နဲ့တဦးချင်းစီအတွက်ဆုလာဘ် sensitivity ကို, တားစီးနှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရှုထောငျ့တိုင်းတာခြင်း
ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှု: သိမှတ်ခံစားမှုနှင့် COMT rs4818 အကြားအသင်းအဖွဲ့များ၏တူးဖော်ရေး, rs4680 haplotypes (2019)
အင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder နှင့်အတူလူနာအတွက် Glial ဆဲလ်လိုင်း-ဆင်းသက်လာ Neurotrophic Factor ၏ပြောင်းလဲ Plasma Levels: တစ်ဦးကဖြစ်ရပ်မှန်-ထိန်းချုပ်ရေး, ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု (2019)
Microstructural အပြောင်းအလဲများနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းအပြုအမူ: တစ်ဦးကပဏာမပျံ့နှံ့ MRI လေ့လာမှု (2019)
Corrigendum: အဆိုပါချို့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်-Making Process ကိုနှင့်စမတ်ဖုန်းစွဲ (2019) နှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်အရေပြား conduction တုံ့ပြန်မှု: မကောင်းပါရွေးချယ်မှုကောင်းမွန်သောပုံပြင်များလုပ်ပါ။
အင်တာနက်စွဲများတွင်ရင်းနှီးလူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်အထီးကျန်သိမှုယန္တရား: တစ်ခုက ERP လေ့လာမှု (2019)
Wi-Fi ကို signal ကိုတွေကိုများအတွက်ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၏အလိုအလျောက်ထောက်လှမ်းအားသာချက်နဲ့အနှုတ်လက္ခဏာများ၏စိစစ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်: တစ်ခုကအဖြစ်အပျက်-related အလားအလာလေ့လာမှု (2019)
တာရှညျအိပ်ရာဝင်ချိန်စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုမှုအရွယ်ရောက်စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများ (2019) အတွက် Insula ၏ ALTER နားခိုရာ-ပြည်နယ် Functional ဆက်သွယ်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်
ပြဿနာစမတ်ဖုန်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက် lateral orbitofrontal မီးခိုးရောင်ကိစ္စမူမမှန် (2019)
အင်တာနက်စွဲခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်သော ဦး နှောက်ကွန်ယက်များ - လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သော fMRI လေ့လာမှု (2019)
အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်ဆေးခန်း - ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလက္ခဏာများ (2019)
ဗီဒီယိုဂိမ်း (1998) စဉ်အတွင်း striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်သက်သေအထောက်အထား
Dopamine ဗီဇနှင့်အလွန်အကျွံအင်တာနက်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစား (2007) နဲ့မြီးကောင်ပေါက်အတွက်မှီခိုဆုချ
အလွန်အကျွံဂိမ်းကစားအတွက်ကွန်ပျူတာဂိမ်းဆက်စပ်တွေကိုအပေါ်တိကျတဲ့ cue reactivity ကို (2007)
အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲလမ်း (2008) ၏ဂိမ်းကစားတတ်ပြီးသူနဲ့ဆက်စပ်ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာ။
N400 ဖြစ်ရပ်-related အလားအလာအပေါ်အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (2008)
အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ (2009) နဲ့ကလေးတွေအင်တာနက်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားအပေါ် methylphenidate ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
ကွန်ပျူတာနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားပွဲအသုံးပြုသူများနှင့် Non-ဂိမ်းသည်အသုံးပြုသူများအကြားစွဲလမ်းတဲ့နှိုင်းယှဉ် (2010)
Bupropion ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်လွှတ်ပေးရန်ကုသမှုကိုအင်တာနက်ကဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲလမ်း (2010) နဲ့လူနာအတွက်ဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့် cue-သွေးဆောင်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုဘို့တဏှာလျော့ကျ
အင်တာနက်ဂိမ်းသုံးရင်အတွက်ပြောင်းလဲဒေသဆိုင်ရာနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်: တစ် 18F-fluorodeoxyglucose positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု (2010)
ဗွီဒီယိုဂိမ်း Play ကိုအတူ Cue သွေးဆောင် Prefrontal Cortex လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်အပြောင်းအလဲများ။ (2010)
ဦးနှောက်ကအင်တာနက်ဂိမ်းကစားစွဲနှင့်အတူဘာသာရပ်များနှင့်ငွေလွှဲဘာသာရပ်များအတွက် cue ထိတွေ့မှုအောက်တွင်အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားဘို့တဏှာ၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ (2011)
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားစွဲ (2011) နဲ့ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက် Cue သွေးဆောင်အပြုသဘောစိတ်ခွန်အားနိုးသွယ်ဝိုက်တုံ့ပြန်မှု
ဆုကြေးထိခိုက်လွယ်မှု Enhanced နှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းအတွက်ဆုံးရှုံးမှုထိခိုက်လွယ်မှုလျော့နည်းသွား: တစ်မှန်းဆ Task ကို (2011) စဉ်အတွင်းတစ် fMRI လေ့လာ
အင်တာနက်ကဗီဒီယိုဂိမ်းကစား (2011) အတွက်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့အလိုဆန္ဒ
အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကဂိမ်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း: Warcraft ကစားသမားအလွန်အကျွံကမ္ဘာ့ဖလားအန္တရာယ်များအခြေအနေများအောက်တွင်အောင်ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ပြဿနာများကိုရှိပါသလား? (2011)
ဗီဒီယိုကဂိမ်းကစားခြင်း (2011) ၏အာရုံကြောအခြေခံ
On-line ကိုဂိမ်းစွဲလမ်း (2012) နဲ့မြီးကောင်ပေါက်အတွက် On-line ကိုဂိမ်းကစားများ၏ပြင်းထန်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မိသားစုကုထုံး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
ဂိမ်းကစားခြင်းတွေကိုဆီသို့အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့် disinhibition အထီးမြီးကောင်ပေါက်အတွက်ပြဿနာဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်။ (2012)
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားစွဲအတွက်ပြည်နယ်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအနားယူ၏ဒေသဆိုင်ရာတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအတွက် ALTER ။ (2012)
အလွန်အကျွံကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားသူအတွက်မှားယွင်းနေသည်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်တုန့်ပြန်တားစီး: ဖြစ်ရပ်တစ်ခု-related အလားအလာလေ့လာမှု (2012)
အင်တာနက်ကဂိမ်းစွဲလမ်းနှင့်နီကိုတင်းမှီခိုနှင့်အတူ comorbid ဘာသာရပ်များအကြားတွင် cue-သွေးဆောင်ဂိမ်းကစားတတ်ပြီးနှင့်ဆေးလိပ်သောက်တဏှာနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ဦးနှောက်ကိုတက်ကြွ။ (2012)
အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲအတွက် cue ရုပ်ပုံများအားဖြင့်သွေးဆောင်တောင်းပန်၏ဦးနှောက် fMRI လေ့လာမှု (အထီးမြီးကောင်ပေါက်) (2012)
On-line ကိုဂိမ်းစွဲလမ်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂိမ်းကစား (2012) နဲ့လူနာ differential ဒေသဆိုင်ရာမီးခိုးရောင်ကိစ္စ volumes ကို
ပျံ့နှံ့ tensor ပုံရိပ်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားစွဲ (2012) တွင် thalamus နှင့် posterior cingulate cortex မူမမှန်ဖော်ပြသည်။
အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲအတွက်ဦးနှောက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စတစ် voxel အခြေစိုက် morphometric ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (2012)
အင်တာနက်ဂိမ်းစွဲလမ်း (2012) နဲ့တဦးချင်းစီအတွက်အင်တာနက်ကိုဂိမ်း-related ပုံနဲ့အလုပ်အမှုဆောင်လိုငွေပြမှုဆီသို့သိမှုဘက်လိုက်မှု
အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲမှုနှင့်အတူနှောင်းပိုင်းဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အတွက် cortical ထူပုံမှန်မဟုတ်သော (2013)
Cue reactivity ကိုနှင့်ရောဂါဗေဒကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားသူအတွက်၎င်း၏တားစီး (2013)
အင်တာနက်စွဲလမ်း (2013) နဲ့မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဦးနှောက်ဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွား
အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲလမ်း (2013) တွင်မီးခိုးရောင်ကိစ္စနှင့်အဖြူကိစ္စမူမမှန်။
အင်တာနက်စွဲများတွင်သိမြင်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်: To-လွယ်ကူတဲ့ခက်ခဲပြီးလွယ်ကူ-to-ခက်ခဲ switching အခြေအနေများမှ fMRI သက်သေအထောက်အထား (2013)
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားစွဲ (2013) နဲ့မြီးကောင်ပေါက်များတွင်ပြောင်းလဲ default အနေနဲ့ကွန်ယက်ကိုငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု
အင်တာနက်စွဲလမ်း (2013) နဲ့အထီးမြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာလျှော့ချ orbitofrontal cortical ထူ
အင်တာနက်စွဲအကြားဆုလာဘ် / ပြစ်ဒဏ်စိတ်တွေ, သူတို့စွဲလမ်းအပြုအမူတွေများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု (2013) ။
အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲလမ်းနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အတွက်အနိမ့်အကြိမ်ရေပွောငျးခွငျးမူမမှန်၏ amplitude (2013)
ဂိမ်းကိုသာကြည့်ရုံနှင့်မလုံလောက်ပါ။ တက်ကြွ။ ဆိုးဝါးသောကစားနေစဉ်အတွင်းဗွီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုမှအောင်မြင်မှုများနှင့်ရှုံးနိမ့်မှုများအတွက် striatal fMRI ကဆုချသည်။
အဘယ်အရာကိုအင်တာနက်ကစွဲပြင်းထန်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များအားဖြင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်လျှင်ပင်အွန်လိုင်းကစားခြင်းကိုဆက်လက်စေသည်? တစ်ဦး fMRI လေ့လာမှု (2013) မှဖြစ်နိုင်ပါ့မလားရှင်းလင်းချက်
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားစွဲ (2013) နဲ့မြီးကောင်ပေါက်များတွင်သွေးလွှတ်ကြောလှည့်ဖျား-တံဆိပ်ကပ် perfusion သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်၏ Voxel-Level နှိုင်းယှဉ်။
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2013) တွင်ဂိမ်းကစား cue အာရုံအောက်မှာတုန့်ပြန်တားစီးဘို့အဦးနှောက်ကို Activation
အင်တာနက်ကဂိမ်းစွဲ: လက်ရှိအမြင်များ (2013)
တစ်ဦး functional သံလိုက်ပုံရိပ်လေ့လာမှု (2014): အင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်တုန့်ပြန်တားစီးနှင့်အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့ကာလအတွင်းပြောင်းလဲဦးနှောက်ကို Activation
အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှုများတစ် Meta-analysis သည် (2014): အင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် prefrontal ကမောက်ကမဖြစ်မှု
ရို Impulse နှင့် Go ကို / အဘယ်သူမျှမ-Go ကို fMRI လေ့လာမှု (2014) ကထင်ရှားအင်တာနက်ဂိမ်းကစားစွဲနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်များတွင်ချို့ယွင်း prefrontal ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့တားစီး function ကို
ပေပုံရိပ်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2014) တွင်ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲများကိုထုတ်ဖော်ပြသ
ဦးနှောက်ကအင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2014) တွင်တုံ့ပြန်မှုတားစီး၏ဆက်နွယ်နေပါသည်
On-line ကိုဂိမ်းစွဲလမ်း (2014) တွင်ပရိုတွန်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု spectroscopy (Mrs)
စွဲဂိမ်းကစားအတွက်ဇီဝကမ္မ arousal လိုငွေပြမှုပိုမိုနှစ်သက်ဂိမ်းအမျိုးအစား (2014) အပေါ်အခြေခံပြီးကွဲပြားခြားနားသော
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါ (2014) တို့အကြား Neurophysiological နှင့် neuroimaging ရှုထောင့်
'အင်တာနက်ဂိမ်းစွဲသူများ' တွင်ပုံမှန်မဟုတ်သောမီးခိုးရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပမာဏ (၂၀၁၄)
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2014) နဲ့မြီးကောင်ပေါက်များတွင်ကျူးကျော်အတူပြောင်းလဲ cingulate-hippocampal synchrony Correlate
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါနှင့်အတူလူအတွက်ချို့ယွင်းအန္တရာယ်အကဲဖြတ်: တစ်ဖြစ်နိုင်ခြေလျှော့တာဝန် (2014) မှ fMRI သက်သေအထောက်အထား
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2014) နဲ့မြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာလျှော့ချဖိုင်ဘာသမာဓိရှိနှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားစွဲ (2014) တွင် DKI သုံးပြီးမီးခိုးရောင်အမှု၌အတွက် Vivo microstructure ပွောငျးလဲ၏အကဲဖြတ်
အင်တာနက်ကဂိမ်းစွဲမှုပြဿနာအားသုံးသပ်ခြင်း၏ဘွဲ့ (2014) အခြေစိုက် EEG နှင့် ERP
တစ်ခုအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါ (2014) တွင်ချို့ယွင်းအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်လျော့နည်းသွား
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားစွဲ (2014) နဲ့ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ကွေအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောကျိန်းဝပ်-ပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုကိုပြောင်းလဲ
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2014) နဲ့လူငယ်အတွက် putamen functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု၏တစ်ဦးရွေးချယ်ပါဝင်ပတ်သက်မှု
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ, လောင်းကစားရောဂါနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါအကြားတူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု: Impulse နှင့် compulsive အပေါ်တစ်ဦးကအာရုံ (2014)
အရက်မှီခိုနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2015) တို့အကြား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအတွက်ကွာခြားချက်များ
နှောင်းပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် / အစောပိုင်းလူကြီး (2015) တွင်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါတစ်ဦးချင်းစီအတွက် core ဦးနှောက်ကွန်ယက်ကို interaction ကနှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး
မီးခိုးရောင်ကိစ္စသိပ်သည်းဆပြောင်းလဲနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2015) နဲ့အရွယ်ရောက်အတွက် amygdala ၏ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်
အရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလူနာနှင့်အတူတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ် (2015): အင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါလူနာတစ်ဇီဝအမှတ်အသားအဖြစ်အနားယူ-ပြည်နယ်ဒေသဆိုင်ရာတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း
တစ်ဦး Semi-သဘာဝအလျောက်ဂိမ်း-ဒီဇိုင်း (2015) မှ ERP-ရလဒ်များကို: ရောဂါဗေဒကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားအတွက်ပြောင်းလဲဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့
Striatum morphometry အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2015) တွင်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးလိုငွေပြမှုနှင့်လက္ခဏာပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေသည်
2015 (နားခိုရာ-ပြည်နယ် fMRI အသုံးပြုခြင်းတစ်ဦးကမူလတန်းလေ့လာမှု: အင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder နှင့်အတူပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက် Prefrontal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး Interhemispheric Functional ဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွား)
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2015) နဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်ဦးနှောက်ရဲ့ functional ဝိသေသလက္ခဏာများ
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2015) နဲ့မြီးကောင်ပေါက်အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်နှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏အပြောင်းအလဲတချို့
ပြဿနာဂိမ်းကစား (2015) တွင်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးတစ်ခု fMRI လေ့လာမှု
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ (2015) နဲ့ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက် insula ၏ပြောင်းလဲငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု
အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက်နှင့်ဆုလာဘ်ကွန်ယက်ကိုအကြား Imbalanced အလုပ်လုပ်တဲ့ link ကိုအင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ (2015) တွင်အွန်လိုင်းဂိမ်းရှာကြံအပြုအမူတွေကိုရှင်းပြ
အလွန်အကျွံအွန်လိုင်းဂိမ်း (2015) နဲ့လူငယ်ယောက်ျားလေးလူကြီးများအတွက်ပြောင်းလဲ Cardiorespiratory စုံတွဲ
အတွေ့အကြုံ (2015) ဂိမ်းကစားခြင်းပြီးနောက်ဂိမ်းတွေကိုမှဦးနှောက် reactivity ပြောင်းလဲ
သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါ Disorders များအတွက်အလားအလာအကျိုးသက်ရောက်မှု (2015)
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ (2015) နဲ့ငယ်ရွယ်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်စကားလုံးအပြောင်းအလဲနဲ့ကျိန်ဆိုနေစဉ် frontolimbic ဒေသ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှု
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2015) ၏ပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုနဲ့ပြင်းထန်မှုအနားယူပုံမှန်မဟုတ်သော prefrontal cortex
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါ Neurophysiological features တွေ: တစ်ငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ် EEG လေ့လာမှု (2015)
ပြည်နယ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (2015) အနားယူရာမှသက်သေအထောက်အထားများ: အင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါအတွက် ventral tegmental ဧရိယာနှင့်နျူကလိယ accumbens အကြား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွား
အင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder (2015) နဲ့ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက်စိတ်ခံစားမှုနှောက်ယှက်ကျော် Prefrontal သိမှုထိန်းချုပ်ရေးစိတ်မချရ
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2015) တွင်အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းအတက်အကျများ၏လွှဲခွင်ထဲမှာ frequency-မှီခိုအပြောင်းအလဲများ
အတူအရွယ်ရောက်သူတို့တွင်အတက်ကြွသောနှောင့်ယှက်ခြင်း၏တားစီး အင်တာနက်ကို ဂိမ်းကစားခြင်း အစီအစဉ်ပျက်သော (2015)
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2015) နဲ့မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းဦးနှောက်ကို Activation ပေါ်တွင်အန္တရာယ်အဆင့်ကိုတို့ကမော်ဂျူလျော့နည်းသွား
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ Neurobiological ဆက်စပ်မှု: ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအလားတူ (2015)
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ (2015) နဲ့မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ဦးနှောက်ဆက်သွယ်မှုနဲ့စိတ်ရောဂါ comorbidity
ဦးနှောက်ရဲ့ microstructural ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသက်ရောက်မှု: Cross-Section နှင့် longitudinal ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (2016)
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ (2016) တွင် cue reactivity ကိုစဉ်အတွင်း ventral နှင့် dorsal striatum ၏ activation
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ (2016) နဲ့မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ဦးနှောက်ဆက်သွယ်မှုနဲ့စိတ်ရောဂါ comorbidity
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2016) တွင်ပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုများနှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုထိန်းချုပ်အနားယူ Frontostriatal ဆားကစ်,
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အာရုံဖြစ်ရပ်-related အလားအလာတာဝန် (2016) ကာလအတွင်းအလုပ်မဖြစ်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့
အင်တာနက်ကဂိမ်းစွဲမှုပြဿနာ (2016) နဲ့ကိုရီးယားအမျိုးသားပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက်နားခိုရာ-ပြည်နယ် Peripheral catecholamines နှင့်တော့ပူပန် Levels
network-အခြေပြုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုသဘောထားကို (2016) မှ Related Functional ဆက်သွယ်မှုဖော်ပြ
အင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder အတွက် Insula နှင့်နျူကလိယ Accumbens ၏ပြောင်းလဲ Functional ဆက်သွယ်မှု: နားခိုရာပြည်နယ် fMRI လေ့လာမှု (2016)
လုလင်တို့သည် (2016) တွင် fMRI-နှင့် ICA အားဖြင့်ထင်ရှားအဖြစ်ဗီဒီယိုဂိမ်းထဲမှာအကြမ်းဖက်မှု-ဆက်စပ်အကြောင်းအရာဦးနှောက်ကွန်ရက်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုအပြောင်းအလဲများကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ
အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုဂိမ်းကစားအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု: တစ်ခုစွဲ Stroop နှင့်အမြင်အာရုံစုံစမ်းစစ်ဆေး (2016) ကို အသုံးပြု. စမ်းသပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2016) နဲ့ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက် insula-based ကွန်ယက်၏ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွား
အလုပ်မဖြစ်က default mode ကိုကွန်ယက်နှင့်အင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါနှင့်အတူလူအတွက်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက်ကို: လွတ်လပ်သောအစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေလျှော့တာဝန် (2016) အရ
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2016) နဲ့ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချကာလအတွင်းချို့ယွင်း anterior နောက်ကျနေခဲ့သည် activation
အင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder (2016) နဲ့ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက် Impulse ၏ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆက်စပ်မှု
Internetgamingdisorder နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အာရုံဖြစ်ရပ်-related အလားအလာတာဝန် (2016) ကာလအတွင်းအလုပ်မဖြစ်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2016) နဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်ဦးနှောက်ရဲ့ functional ဝိသေသလက္ခဏာများ
တစ်ခုစွဲ Stroop Task ကို (2016) စဉ်အတွင်းအင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder အတွက်ဂိမ်း-Related တွေကိုဆီသို့ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်
အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုဂိမ်းကစားသူများနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်း Disorder (2016) မှ Cue Exposure ကုထုံး၏ဖြစ်နိုင်သောလျှောက်လွှာတို့တွင်အ Cue-သွေးဆောင်အပြုအမူများနှင့်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအပြောင်းအလဲများ
တစ်ဦးကပရိုတွန်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု spectroscopy (Mrs) လေ့လာမှု (2016): အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်များတွင်အင်တာနက်ဂိမ်းကစား Neurochemical ဆက်စပ်မှု
ပြောင်းလဲငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2016) အတွက်တစ်ဦးစွဲလမ်းမူအကျင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုအောက်ပါအပြောင်းအလဲများကို
ရောဂါဗေဒလူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူများ (2016) တွင်ရောဂါဗေဒအင်တာနက်ကိုဂိမ်းကစားသူများနှင့်ကိုယ်ပိုင် Reflection ၏ Avatar သတ်မှတ်ခြင်း၏ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအခြေခံ Exploring
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါနှင့်အတူလူအတွက်ပြောင်းလဲဦးနှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ရက်များ: ငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ် fMRI (2016) မှအထောက်အထား
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ (2016) ရက်နေ့တွင် bupropion နှင့် escitalopram ၏သက်ရောက်မှုတစ်ခုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု
လွတ်လပ်သောအစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (2016): အလုပ်တခုကိုဝတဲ့နှောင့်နှေးမှုအောကျတှငျအငျတာနကျဂိမ်းစွဲထဲမှာချို့ယွင်းအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆုလာဘ် circuit ကို
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အဖြူကိစ္စကွန်ယက်၏အဆိုပါ topological အဖှဲ့အစညျး (2016)
ပြောင်းလဲကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ Functions များနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းစွဲမှုပြဿနာ (2016) နဲ့အမျိုးသားပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက်စိတ်ဆင်းရဲနေစရိုကျမြား
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2016) နဲ့မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အန္တရာယ်အဆင့်နှင့်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအကြား covariance အပေါ်ရလဒ်ကို၏ဆိုးကျိုးများ
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2016) နဲ့မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုသိပ်သည်းဆများအစားထိုးတိုး
နှောင့်နှေးလျှော့, အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်အင်တာနက်နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်း Disorders (2016) နဲ့တဦးချင်းစီအကြားငြင်းပယ်ခံရ sensitivity ကို
ဗွီဒီယိုဂိမ်းကစားသမားများနှောင့်နှေးလျှော့: ဂိမ်းကစားသူများများထဲတွင်အချိန် Duration: များ၏နှိုင်းယှဉ် (2017)
အင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder (2017) နဲ့အထီးလူငယ်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုအားနည်းချက်
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ (2017) နဲ့တဦးချင်းစီအတွက်ဂိမ်းကစားခြင်း-related လှုံ့ဆော်မှုမှစွဲလမ်းဂိမ်းတိုး
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါအတွက်ကို Default mode ကွန်ယက်တွင်ပြောင်းလဲ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု: ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ ADHD ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (2017)
ကျား, မများ၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားနှစ်အောက်အင်တာနက်စွဲနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်း Disorder (2017) ၏အခြေအနေတွင်သွယ်ဝိုက်သင်ယူမှုစွမ်းရည်နှင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူအတွက်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်
အင်တာနက်ကဦးနှောက်သုတေသနနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါ (2017) တွင်နယူးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု
တစ်ဦးကငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ် EEG လေ့လာမှု (2017): အင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်အလားအလာလက္ခဏာအပြောင်းအလဲများနှင့်အနှေးလှိုင်းလှုပ်ရှားမှုအကြားအသင်းအဖွဲ့များ
တုန့်ပြန်တားစီးနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်း Disorder: တစ်ဦးတွင် Meta-analysis သည် (2017)
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2017) နဲ့တဦးချင်းစီအတွက်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်း Dissociable အာရုံကြောလုပ်ငန်းစဉ်များ
ကို default mode ကိုကွန်ရက်အတွင်း၌စိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်နှင့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအကြားဆက်စပ်မှုကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု (2017) မှအင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါခွဲခြားနိုင်ပါတယ်
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါအတွက်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှု: တစ်ဦးကငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ် EEG ကွက်တိဝင်လေ့လာမှု (2017)
အဆိုပါ prefrontal cortex အတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုပြောင်းလဲအင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါနှင့်စိတ်ဓာတ်ခံစားချက် (2017) အကြားဆက်ဆံရေးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်
ငယ်ရွယ်ကိုရီးယားယောက်ျားလေး (2017) တွင်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါအတှကျအ biomarker ဖော်ထုတ်ခြင်း၏ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေး metabolomics
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါအတွက်သိမှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ဆုလာဘ်အရှုံးအပြောင်းအလဲနဲ့: အပန်းဖြေအင်တာနက်ကိုဂိမ်း-အသုံးပြုသူများသည် (2017) နဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမှရလဒ်များ
အင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder (2017) နဲ့ Comorbidity နှင့် MDD Comorbid မပါဘဲဗိုလ်မှူးစိတ်ကျရောဂါ Disorder (MDD) တို့အကြား electroencephalography (EEG) ဆိုနိုင်ပါတယ်နှိုင်းယှဉ်ရန်
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ (2017) ၏သပ္ပါယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း, အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းစတိုင်
အင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder (2017) နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မျက်နှာဖော်ပြချက်များသတိလစ်ထုတ်ယူခြင်း။
အရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါရှိသူများမှနှိုင်းယှဉ်အင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါ (2017) နဲ့ယောက်ျားအတွက်ပြောင်းလဲ hippocampal အသံအတိုးအကျယ်နှင့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ (2017) တွင် default အ-mode ကို, အလုပ်အမှုဆောင်-ထိန်းချုပ်မှုနှင့် salience ကွန်ရက်ပြောင်းလဲနားချင်းဆက်မှီ
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2017) နဲ့နီကိုတင်းမှီခိုနှင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူဆေးလိပ်သောက်ကြားရှိ dorsolateral prefrontal cortex ၏ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအတွက်ခြားနားချက်
အင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder နှင့်အတူပြည်သူ့အတွက်တဏှာနှင့် Cue reactivity နှင့်အတူပြောင်းလဲဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုများ Associated: Recreational အင်တာနက်ကိုဂိမ်းအသုံးပြုသူများနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ရာမှအထောက်အထား (2017)
အဆိုပါ hippocampus ၏ plasticity အပေါ်ဗီဒီယိုဂိမ်း၏သက်ရောက်မှု (2017)
အဖြစ်အပျက်-related အလားအလာဖြင့်တိုင်းတာအင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါအတွက်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ differential neurophysiological ဆက်စပ်မှု (2017)
ကိုက်ညီကျန်းမာရေးထိန်းချုပ်မှုများ (2017) ကိုနှိုင်းယှဉ်အဖြစ်ဗွီဒီယိုဂိမ်းစွဲလမ်းအတွက်ရောဂါဗေဒ၏ Cross-Section အထောက်အထား: & Emerging လူကြီးအတွက်ဗွီဒီယိုဂိမ်းစွဲမှုပြဿနာ
အဖြူကိစ္စများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသမာဓိပျံ့နှံ့ tensor ပုံရိပ်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2017) နဲ့မြီးကောင်ပေါက်အတွက် Impulse နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်
(2017) Playing ပြဿနာဗွီဒီယိုဂိမ်းအတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံလက်ခဏာခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Group မှလွတ်လပ်သောအစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါ (2017) ၌တရားအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက်၏ Alternative ထုတ်ဖော်ပြသ
6 လနောက်ဆက်တွဲ ERP လေ့လာမှု (2017): အင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်အလုပ်မဖြစ်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ (2017) နဲ့ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်မူမမှန်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်နှင့် Impulse
အင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder ၏ဦးနှောက် Imaging ကလေ့လာရေးတခုတခုအပေါ်မှာ Update ကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက် (2017)
တစ်ဦးကပဏာမလေ့လာမှု (2017): အင်တာနက်ကလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါအကြားဦးနှောက်ဆက်သွယ်မှု၏နှိုင်းယှဉ်
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါအတွက် Impulse နှင့် compulsive: obsessive-compulsive ရောဂါနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါ (2017) နဲ့တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်
အင်တာနက်ကဂိမ်းသုံးရင် (2017) နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပုံဆောငျဆုကြေးများအတွက်ချို့ယွင်းတုံ့ပြန်ချက်ထုတ်ယူခြင်း
ဗိုလ်မှူးစိတ်ကျရောဂါ Disorder (2017) နဲ့လူနာများအတွက်အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုဂိမ်း Play ပေါ်တွင် Bupropion နှင့် Escitalopram ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှိုငျးယှဉျ
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါအတွက် functional နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအာရုံကြောကိုပြောင်းလဲ: တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည် (2017)
မူးယစ်ဆေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများစွဲလွတ်လပ်သောအတွက်ပြောင်းလဲအပျက်သဘောဆောင်သောလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောထုတ်ယူခြင်းလား? အင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder (2017) နဲ့မူးယစ်ဆေး-နုံလူငယ်ကနေတွေ့ရှိချက်
အလုပ်မဖြစ် Prefrontal ရာထူးအမည် Task ကိုဝတစ်ဦးနှောင့်နှေး (2017) စဉ်အတွင်းအင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder နှင့်အတူပြည်သူ့အတွက် Impulse နှင့်ဆက်နွယ်နေသည်
အင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder (2017) ၏တစ်ပွင့်ဆိုင် Neurocognitive မော်ဒယ်
အဝလွန်နှင့်အဝလွန်လူပျိုတို့အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုအမှတ်အသားများနှင့်အစားအစာစားသုံးမှုအပေါ်ကြည့်ရှုရုပ်မြင်သံကြားနှိုင်းယှဉ်ကစားဗီဒီယိုဂိမ်း acute သက်ရောက်မှု: တစ်ဦးက randomized ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး (2018)
multimode Biosignals အသုံးပြုခြင်းအင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder နှင့်အတူပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက်ဂိမ်းအဘို့တဏှာ၏ detection (2018)
သိမှုပျက်ယွင်းခြင်းနှင့်အနီး-Miss အင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder အတွက်လောင်းကစားဝိုင်း: တစ်ဦးကပဏာမလေ့လာမှု (2018)
နားခိုရာ-ပြည်နယ်တည်ငြိမ်သော၏ ALTER နှင့်အင်တာနက်ဂိမ်း Disorder (2018) နဲ့ဘာသာရပ်များအတွက် Dorsolateral Prefrontal Cortex ၏ Dynamic Functional ဆက်သွယ်မှု
အဆိုပါ anterior cingulate နှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါနှင့်အတူငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက် orbitofrontal cortex အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စကွဲပြားခြားနားမှု: က Surface-based morphometry (2018)
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုသဘောထားကိုနှင့်အတူဆက်စပ်နေတဲ့ဦးနှောက် structures များ (2018)
အင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder (2018) နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ MicroRNA ဖော်ပြမှု Levels ပျံ့နှံ့နေတဲ့
အင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder (2018) တွင်ဂိမ်းကစားခြင်းစဉ်အတွင်းနှလုံးခုန်နှုန်း variable ပြောင်းလဲ
အင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပြောင်းလဲ gray matter Volume ကိုနှင့်နားခိုရာ-ပြည်နယ်ဆက်သွယ်မှု: တစ်ဦးက Voxel-အခြေပြု Morphometry နှင့်နားခိုရာ-ပြည်နယ် Functional Magnetic ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging ကလေ့လာမှု (2018)
အင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder နှင့်အတူအမျိုးသားလူငယ်များအတွက်တိုးမြှင့်နောက်ကျနေခဲ့သည် cortical ထူ Associated နှင့်အတူရောဂါလက္ခဏာပြင်းထန်မှု: တစ်ဦးက Surface-အခြေပြု Morphometric လေ့လာမှု (2018)
တစ်ဦးမဖြစ်မနေချိုးစဉ်အတွင်းဂိမ်းနှင့်ချက်ချင်း abstinence စဉ်အတွင်းကျား-related functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုနဲ့တဏှာ: အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2018) ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်တိုးတက်မှုများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု
Bupropion အင်တာနက်ကိုအခြေခံပြီးလောင်းကစား Disorder နှင့်အင်တာနက်ဂိမ်း Disorder (2018) နှင့်အတူလူနာအတွက်ဦးနှောက် Functional ဆက်သွယ်မှုအပေါ်အမျိုးမျိုးသက်ရောက်မှုဖော်ပြပေး
Impulse အင်တာနက်ကိုဂိမ်း Play စ serotonin Transporter Gene (2018) ၏က Short Allele အတူနှိမ့်လူနာများအတွက်ပုံမှန် Mode ကိုနှင့် Salience ကွန်ရက်အကြားတိုး Functional ဆက်သွယ်မှုနှင့်ဆက်နွယ်နေသည်
တစ်ခုက ERP စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု (2018): ကဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့်ကျူးကျော်ကြားရှိအသင်းအဖွဲ့အတွက်ရွေးချယ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် desensitization များ၏အခန်းကဏ္ဍ
Interrelationship နှင့်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရားများ (2018): အင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder နှင့်စီးပွားပျက်ကပ်အကြားအဆိုပါ Comorbidity
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ပြောင်းလဲမီးခိုးရောင်ကိစ္စပမာဏ၏ပဏာမသက်သေအထောက်အထား: ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအာရုံကို-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါလက္ခဏာတွေ (2018) ၏သမိုင်းနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့များ
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါအတွက် cortical အထူနဲ့ volume မူမမှန်: အပန်းဖြေအင်တာနက်ကိုဂိမ်းအသုံးပြုသူနှိုင်းယှဉ်ရာမှအထောက်အထား (2018)
အင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder အတွက် Neurobiological ဆက်စပ်မှု: တစ်ဦးကစနစ်တကျစာပေသုံးသပ်ချက် (2018)
ကျန်းမာ disorders အင်တာနက်ဂိမ်းကစား၏လူမှု Genomics (2018)
အင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder နှင့်အတူလူနာအတွက်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်သွယ်မှုအတွက် longitudinal အပြောင်းအလဲများ: နားခိုရာ-ပြည်နယ် EEG ဆိုနိုင်ပါတယ်လေ့လာပါ။
တစ်ဦးကရှေ့ပြေးလေ့လာမှု (2018): အင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder နှင့်အတူအမျိုးသားလူကြီးများအတွက် Serum အချိုမှုအဆင့်လျော့ကျ
အင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် Distort ကိုယ်ပိုင်အယူအဆ၏အာရုံကြောဆက်စပ်: တစ်ဦးက Functional MRI လေ့လာမှု (2018)
ရောဂါဗေဒခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့် Non-ရောဂါဗေဒအင်တာနက်ကိုဂိမ်းကစားသူများကျဲပါး Neuroanatomical အင်္ဂါရပ်များ (2018) အသုံးပြုခြင်း
ကျား, မများ၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားနှစ်အောက်အင်တာနက်စွဲနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်း Disorder (2018) ၏အခြေအနေတွင်သွယ်ဝိုက်သင်ယူမှုစွမ်းရည်နှင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူအတွက်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (2018) တွင်ကျိန်းဝပ်-ပြည်နယ်နှောက်လှုပ်ရှားမှုပွောငျးလဲအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု
အင်တာနက်ကဂိမ်းသုံးရင်ဆုကြေးတုံ့ပြန်ချက်ထုတ်ယူခြင်း (2018) စဉ်အတွင်းနံရံပစ်ကစားနည်း-Striatal Functional ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်
အယ်ဒီတာ့အာဘော်: ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရားများကိုအင်တာနက်ဂိမ်း Disorder (2018) အရင်းခံကျတာကတော့
အဆိုပါဂိမ်းစဉ်အတွင်းအခြေအနေများ၏သက်ရောက်မှု (2018): နှလုံးခုန်နှုန်း variable အင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder အတွက် Gameplay စဉ်အတွင်းပြောင်းလဲ
အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းအင်တာနက်-Related တွေကိုခါနီး Implicit သိမှုဘက်လိုက်မှု၏ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်စပ်မှု: တစ်ခုက ERP လေ့လာမှု (2018)
Comorbid စီးပွားပျက်ကပ် (2018) နှင့်အတူအင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder နှင့်အတူလူငယ်အထီးအတွက် anterior Cingulate Cortex Form ကိုထူးခြားသော Functional ဆက်သွယ်မှုပုံစံများ၏မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်း
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ (2018) မှကျား, မ-တိကျတဲ့အားနည်းချက်များများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု: ဂိမ်းကစားခြင်းမီနှင့်အပြီးဂိမ်းကစားတွေကိုမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကျား-related ကွဲပြားခြားနားမှု
အင်တာနက်ကဂိမ်းစွဲလမ်း (2018) တွင်ဦးနှောက်တည်ဆောက်ပုံကွန်ရက်ဆက်သွယ်မှု topology အတွင်းမှ ALTER
ထိရောက်သောဆက်သွယ်မှုကို အသုံးပြု. မြေပုံအင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါမြား: A ရောင်စဉ်တန်းပြောင်းလဲနေသောကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မော်ဒယ်လေ့လာမှု (2018)
မိန်းမတွေကယောက်ျားထက်အင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါပိုမိုအားနည်းချက်နေသောခေါင်းစဉ်: cortical ထူမူမမှန် (2018) မှအထောက်အထား
ကိုရီးယားအထီးမြီးကောင်ပေါက် (1) အင်တာနက်ဂိမ်းကစားစွဲနှင့်အတူလူ့ Corticotropin-ဖြင့်ထုတ်လွှဟော်မုန်း receptor 1 (CRHR2018) ၏မျိုးဗီဇအသင်းအဖွဲ့
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါအတွက် cue-ရူးနှမ်းမတရားသောအတွက်ကျား-related ကွဲပြားခြားနားမှု: ဆင်းရဲချို့တဲ့ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ (2018)
ဗီဒီယိုဂိမ်းထဲမှာအကြမ်းဖက်မှုလူမှုရေးပါဝင်ပုံရိပ်တွေ (2018) မှတုန့်ပြန် limbic နှင့်ယာယီဒေသများ၏တစ်ဦးအနိမ့် activation ထုတ်လုပ်
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားစွဲများနှင့်ကိုရီးယားအထီးမြီးကောင်ပေါက် (2018) တွင် leukocyte telomere အရှည်အကြားအစည်းအရုံး
အင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder နှင့်အတူလူနာအတွက်တစ်ဦးကာကွယ် Factor အဖြစ်ခံနိုင်ရည်၏ Neurophysiological ယန္တရားများ: နားခိုရာ-ပြည်နယ် EEG ဆိုနိုင်ပါတယ်လေ့လာမှု (2019)
ငယ်ရွယ်ကိုရီးယားယောက်ျားလေး (2019) တွင်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါအားဖြင့်နှောင့်အယှက် Lipidomic profile များကို
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါအတွက်ပြောင်းလဲဦးနှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ရက်များ: လွတ်လပ်သောအစိတ်အပိုင်းနှင့်ဂရပ်သီအိုရီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေလျှော့တာဝန် (2019) အရ
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ (2019) တွင် cue-reactivity ကိုစဉ်အတွင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ရက်မှာ ALTER
အလားတူနှင့်ကွဲပြားခြားနား Paradigm (2019) ကိုဖြတ်ပြီးမတူကွဲပြား: အင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့အာရုံကြောကိုပြောင်းလဲများ၏ meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း
အရက်နှင့်အွန်လိုင်းဗွီဒီယိုဂိမ်းများ၏အကြီးစား Episode အသုံးပြုသူများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်း (2019)
Hypometabolism နှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါ (2019) နဲ့လူနာအတွက်ပြောင်းလဲဇီဝဖြစ်စဉ်ချိတ်ဆက်မှု
ဂိမ်း Disorder နှင့်စပ်လျဉ်း diagnostic နှင့်ခွဲခြားရေးကိုစဉ်းစား: Neurocognitive နှင့် Neurobiological အင်္ဂါရပ်များ (2019)
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက် Anti-saccade တာဝန်စဉ်အတွင်းအလုပ်မဖြစ်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှု: တစ်ခုကမျက်စိခြေရာခံခြင်းလေ့လာမှု (2019)
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက် Maladaptive neurovisceral interaction က: အဂရပ်သီအိုရီချဉ်းကပ်သုံးပြီးတစ်ဦးကနှလုံးခုန်နှုန်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ၏လေ့လာမှုနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အာရုံကြောဆက်သွယ်မှု (2019)
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ (2019) နဲ့မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အလုပ်မဖြစ်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့
အင်တာနက် Gaming Disorder (2019) နှင့်လူငယ်လူကြီးများတွင် Gaming ကစားစဉ်အတွင်း Frontal Theta လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားသည်။
Online Games Player (2019) တွင်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းစိတ်ဓာတ်ကျရောဂါနှင့် ၀ မ်းရောဂါကူးစက်ခြင်းအခြေအနေအကြားဆက်ဆံရေး
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းဆိုင်ရာရောဂါ (2019) နှင့်ဘာသာရပ်များအားအတင်းအဓမ္မခိုင်းစေခြင်းကြောင့် cue ဓါတ်ပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုများ
စွဲလမ်းမှုပြင်းထန်မှုသည်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းဆိုင်ရာရောဂါအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပါ ၀ င်သည်။ modality, shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်ထိရောက်သောဆက်သွယ်မှု (2019)
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါရှိသူတစ် ဦး ချင်းစီရှိအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသောအလုပ်လုပ်သောကွန်ယက်၏ပဏာမလေ့လာမှု - အပန်းဖြေဂိမ်းကစားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ချက်မှသက်သေသာဓက (2019)
ဗွီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းကိုစွဲလမ်းနေသောလူငယ်များတွင် ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲခြင်း (၂၀၂၀)
ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲလမ်းမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေများ: ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုစပ်ကြားဖြစ်နိုင်ခြေရှုပ်ထွေးမှု? (၂၀၂၀)
မူးယစ်ဆေး ၀ ါးဝါးဝါးသောလူငယ်များတွင်အမူအကျင့်စွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်အတူငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကိုပြောင်းလဲမှုရှိပါသလား။ အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါမှတွေ့ရှိချက်များ (၂၀၂၀)
အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာရောဂါ (Amygdala) ကိုဆက်သွယ်မှုပြောင်းလဲခြင်း (၂၀၂၀)
များပြားစွာကစားနိုင်သောအွန်လိုင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာဂိမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သိထားရသည့်အရာ (၂၀၂၀)
ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအတွက်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းဆိုင်ရာပြdisနာများနှင့်အတူမိသားစုဆက်ဆံရေးနှင့် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုအကြားဆက်စပ်မှု (၂၀၂၀)
တတိယပုဒ်မ: အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှု / Porn အသုံးပြုမှုလေ့လာရေးဆန္ဒပြပွဲများကြောင်းကျိုးဆက်စပ်:
ကနေလေ့လာရေး အထက်ပါစာရင်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှတဆင့်အင်တာနက်စွဲနောက်တော်သို့လိုက်။ အားလုံးသည်အချို့သောဇီဝဗေဒအမှတ်အသားများနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ * ပြောင်းပြန်လှန် * ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြခဲ့သည်။
နည်းစနစ် porn / အင်တာနက်အသုံးပြုမှုပပျောက်ရေးအတွက်ပါဝင်သည်; အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအသုံးပြုသူများကိုအကဲဖြတ်; အသုံးပြုမှုကိုအပြီး Non-အသုံးပြုသူများကိုအကဲဖြတ်။
ဆွမ်ဆီးအတွက်ကျန်းမာရေးအရာရှိများနှင့်တက္ကသိုလ်ကျွမ်းကျင်သူများကအင်တာနက်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ (2015) ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုသစ်ကိုသက်သေအထောက်အထားတွေ့ပြီ
ကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏အင်တာနက်ဂိမ်းပြDisနာကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်လိုသောပြင်းထန်သောအပြုအမူဆိုင်ရာကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှု: longitudinal study (2017)